ब’म र मि’सा’इल हा’न्न सक्ने संसारकै सबैभन्दा खत’रनाक ड्रोन – Halkhabar kura
२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार १६:५७
ब’म र मि’सा’इल हा’न्न सक्ने संसारकै सबैभन्दा खत’रनाक ड्रोन
अमेरिकाले २०२० को जनवरी महिनाको सुरुवातमै इरानका सैन्य कमाण्डर जनरल कासिम सुलेमानीको ड्रोन आक्र’मण गरेर ह’त्या गरेको थियो । केही महिना अगाडि मात्र जम्मु कश्मिरको श्रीनगरमा रहेको भारतको सैन्य एयरबेसमा पनि ड्रोन आक्र’मण गरिएको थियो । यससँगै ड्रोन कतिसम्म खत’रनाक हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा बढेको छ ।
हामीकहाँ विभिन्न फिल्म वा डकुमेन्ट्रीको सुटिङका लागि ड्रोनहरुको प्रयोग बढेको छ । आजभोली टेलिसिरियलदेखि गीतको भिडियो सुटिङ गर्न पनि ड्रोनको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यी भिडियो खिच्ने ड्रोनहरु निकै कम क्षमताका ड्रोनहरु हुन् र यिनीहरुको क्षमता पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ । तर, सैन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ड्रोनहरु भने निकै शक्ति’शाली हुन्छन् । यिनीहरुको क्षमता हामीले कल्पना गरेभन्दा पनि बढी हुन्छ ।
विश्वमा अहिलेसम्म निकै खत’रनाक ड्रोनहरु विकसित गरिएका छन् जुन ड्रोनहरु अन्तर महादेश अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ठूला विमानहरुभन्दा पनि उचाइमा उड्न सक्छन् । यी ड्रोनहरुले दुश्मनहरुमाथि निकै शक्तिशाली बमदेखि मिसाइलसम्म हान्न सक्छन् । विश्वकै सबेभन्दा शक्तिशाली यो ड्रोनको नाम एमक्यु नाइन रिपर हो र यसलाई प्रिडे’टर बी भनेर पनि चिनिन्छ । अमेरिकी वायुसेनासँग कम्तीमा ९३ वटा एमक्यु नाइन रिपर छन् ।
इनसाइडरको एक रिपोर्टअनुसार एमक्यु नाइन रिपरबाट एजीएम ११४ हेलफायर मिसाइल हा’न्न सकिन्छ । यसबाहेक यो ड्रोनबाट जीबीयु १२ पेभवे ३ र जीबी ३८ ज्वाइन्ट डाइरेक्ट अट्याक म्युनिसन्स जस्ता खत’रनाक बम खसाल्न सकिन्छ । यो ड्रोनलाई १ हजार ८५० किलोमिटर टाढाबाट पनि चलाउन सकिन्छ । अमेरिकाले एमक्यु नाइन रिपर ड्रोनको प्रयोग गरेरै इरानी कमाण्डर जनरल सुलेमानीको हत्या गरेको थियो ।
एमक्यु नाइन रिपरको सबैभन्दा खतरनाक विशेषता भनेको दुश्मनले यो ड्रोन आफूनजिक आएको थाहा पनि पाउँदैनन् किनकि यो ड्रोनले एकदमै कम आवाज निकाल्छ । एमक्यु नाइन रिपरलाई संसारकै सबैभन्दा घा’तक ड्रोनमध्येको मानिन्छ । यो आफ्नो गति र प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि घातक मानिएको हो । यसको तौल कुनै अफ्रिकी हात्तीको जति हुन्छ ।
Previous चीनले पाएको यो सफलताले संसारभरि हलचल, किन भयो हलचल हेर्नुहोस यो भिडियो
Next के तपाइको फोन हयांग हुने गर्छ? यसो गर्नले मज्जाले चल्छ
के तपाइको फोन हयांग हुने गर्छ? यसो गर्नले मज्जाले चल्छ
२ भाद्र २०७८, बुधबार १५:५५
चीनले पाएको यो सफलताले संसारभरि हलचल, किन भयो हलचल हेर्नुहोस यो भिडियो
१९ असार २०७८, शनिबार १३:२३
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:३९